Barcelona Oo Dalbaneysa Bernardo Silva Inuu Qeyb Ka Noqdo Heshiiska Frenkie De Jong.
HomeWararka CiyaarahaBarcelona oo dalbaneysa Bernardo Silva inuu qeyb ka noqdo heshiiska Frenkie de Jong.
May 27, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay ka jawaabtay qaabkii Manchester City ay u soo bandhigtay Frenkie de Jong , iyadoo sheegtay in Bernardo Silva uu qeyb ka noqonayo heshiiska bedelka ah.
Manchester United ayaa si aad ah loola xiriirinayay inay u dhaqaaqi doonto De Jong, laakiin kooxda ay xafiiltamaan iyo kooxda heysata horyaalka Premier League ee Man City ayaa laga yaabaa in Barca ay xiddiga heerka caalami ee dalka Holland ka iibiso kooxda Pep Guardiola .
Silva ayaa fure u ahaa Man City xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay 13 gool, waxaana uu caawiyay 7 gool 49 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan, laakiin waxa laga yaabaa inuu ka tago Etihad.
Sida laga soo xigtay The Mirror , Man City ayaa la xiriirtay kooxda Xavi oo xiiseyneysa saxiixa De Jong, laakiin kooxda reer Spain ayaa kaliya aqbali doonta heshiiska hadii Silva uu u dhaqaaqo dhanka kale.
Iyadoo xaalada Barcelona ay u muuqato inay iibineyso De Jong, Xavi wuxuu doonayaa bedelkiisa inuu buuxiyo khadkiisa dhexe, iyadoo AC Milan Franck Kessie uu sidoo kale ku jiro liiska bartilmaameedyada.